म पहिलो इन्टरनेट डेटिङ गर्न थाल्दा, म मिलवाउकी सबैभन्दा ठूलो निर्माण कम्पनीहरु मध्ये एक को लागि एक विपणन निर्देशक थियो, म स्कूल पूर्ण-समय गए, र म कविता को एक पुस्तक प्रकाशन मा काम थियो. अनि अझै, म सोच्नुभएको, किन म अझै सही व्यक्ति भेटे थिएन? यो मेरो पागल म मा dawned कहिल्यै, उन्मादपूर्ण तालिका संभवतः कारण हुन सक्छ.
म अर्को काम परियोजना जस्तै इन्टरनेट डेटिङ नजिक. चाँडै म इमेल र एक धेरै पटक आधारमा नयाँ मान्छे भेला भएको थियो. निस्सन्देह, म सधैं उनलाई कहीं सुविधाजनक र छिटो भेट, मेरो मनपर्ने स्थानको रूपमा कफी पसल. म मा पप सक्छ, एक घण्टा च्याट (जो सधैं मेरो व्यक्तिगत शासन थियो) र त्यसपछि मेरो बाटो मा हुन. यो गर्न-गरेको म मानसिक मेरो कहिल्यै-बढ्दै सूची बन्द जाँच मात्र अर्को बैठक थियो.
अनि पक्का, म हाम्रो मिति पुनः कार्यसूची बनाउनु छ चाहन्छु किनभने सामयिक मान्छे gripe हुनेछ… र पुनः कार्यसूची बनाउनु… र त्यसपछि कहिलेकाहीं, रद्द. तर हे, म लाग्यो, उहाँले मेरो आफ्नै जीवन संग म व्यस्त केटी छु भनेर बुझ्न सक्दैन भने तब उसले आफ्नो नुन लायक थिएन. सही?
म इमेल मार्फत एक मानिस भेटेको सम्म यो थिएन, जसले मलाई भन्दा अलि ठूलो थियो, बच्चाहरु र एक व्यवसाय संग उहाँले सुरु र हाल विस्तार थिए. उहाँले स्मार्ट र रोचक लाग्यो र म आफ्नो इमेल द्वारा intrigued थियो. हामी पूरा गर्न राजी हुँदा अन्तमा दिन आए. म अर्को हप्ता लागि मेरो क्यालेन्डर मिति निर्धारित, मिति लाग्दा तर म समय बनाउन सक्षम हुन चाहन्छु कुनै बाटो थिएन बुझे र रद्द गर्न उहाँलाई भनिन्छ. उहाँले दयालु थियो र हामी फोन मा कुरा गर्न जारी, म उहाँलाई हामीले भेटेका एक पटक चिन्न समय छ चाहन्छु लाग्यो किनभने प्रत्येक समय म लाइन बन्द उहाँलाई प्राप्त गर्न उत्सुक थियो. हामी अर्को मिति निर्धारित र म जस्तै राम्रो थियो रद्द थियो र एक अन्तिम मिनेट प्रस्ताव मेरो असमर्थ-गर्न-कृपया मालिक मेरो डेस्क शिष्टाचार मा देखायो थियो.
म हाम्रो मिति तीन पटक पुनः अनुसूचित भन्न पनि लाज छु. त्यसपछि बल्ल, अन्तमा एक जोडी हप्तापछि म सही क्रिसमस सामुन्ने भेट. म काम बन्द दिन लिएका थिए तर मा लाग्नुभएको थियो 'पकड’ पछिल्लो मिनेट कागजी मा. म मेरो बाटोमा कफी को एक छिटो कप मा लागि उहाँलाई भेट्न सहमत.
उनी सुन्दर र हास्यास्पद थियो र म तुरुन्त उसलाई मन पर्यो. त्यसपछि उहाँले मलाई मेरो छेक्ने बनाएका कुरा भन्नुभयो, सुई ठूलो स्वरमा मेरो व्यस्त जीवन को ध्वनि बन्द रोते.
म एक पल्ट बार्न्स र नोबल मा एक पुस्तक हस्ताक्षर गरे र एक fiftiesh Redheaded महिलाको यो उद्घाटन बधाई दिए. “अनलाइन झूट गर्ने सबै मानिसहरू के माथि छ?”. केही हाँसो थियो, र केही साथ बजाने. म मा सबै प्रश्न छक्क परेका छैनन् थियो, म भने बीस पाँच मानिसहरूको एक कोठा मा कुरा गर्न किनभने, तिनीहरूले पक्कै महिलाहरु बारेमा उही प्रश्न चाहन्छु.
यी परिस्थितिमा मेरो पेट जवाफ आफ्नो व्यवहार ढाकछोप बिना फटाहा भावना बुझ्न गर्ने प्रयास गर्न छ. यो विचार गरौं: मानिसहरू किन झूट गर्न? 1) तिनीहरूले असुरक्षित छौं किनभने र 2) तिनीहरूले थाह भएकोले त्यो तिनीहरूले सत्य बताउन भने, तिनीहरूले पनि मिति प्राप्त छैन. धेरै सरल, सही? होइन यो दर्शकहरु महिलाका लागि. वास्तवमा, तिनीहरूले पुरुष झूट तुलना मा खड़ा नै थिएन (खराब) महिला झूटको (यति खराब छैन), तर तिनीहरूले एक मानिस एक महिला साँचो उमेर लागि माग्नु यो uncivilized छ भनी जिद्दी.
सुन्नुहोस्. म झूट रोक्न सक्दैन, तर म कपट रोक्न आशा गर्छन्. Liars फटाहा भर्त्सना गर्ने र विशेष गरी तिनीहरू ककटेल दलहरू मा मलाई BITCH र विशेष थकाइलाग्दो छ जब.
त्यसैले केही साधारण समस्याहरु बाहिर फेंक गरौं र किन झूटो झूट बुझ्न प्रयास.
तपाईं एक 5'5 मान्छे हुनुहुन्छ भने र 80% छोटो महिला पनि तपाईं संग बाहिर जाने छैनन्, के तपाईं 5'8 छौं भन्न′ र आफ्नो आकर्षण झूटको काबू आशा. यो छैन, तर तपाईं यो गर्छ आशा.
तपाईं हुनुहुन्छ भने एक 175 lb महिला, के तपाईंले आफूलाई सक्छ 'दृढ र Toned'. हो, 'केही अतिरिक्त पाउण्ड’ वा 'ठूलो’ एक बिट बढी सही हुनेछ, तर तपाईं भन्दा मान्छे सत्य प्रतिक्रिया छैन किनभने आफ्नो विवरण संग छडी. जब तपाईं पूरा, उहाँले तपाईंलाई दिनुहुने निराश नजर बेवास्ता गर्न प्रयास, तपाईं कम से कम आफ्नो निष्पक्ष शट रही छौं किनभने, सही?
अनि एक जवान-मा-हृदय दोष सक्ने 61 वर्ष पुरानो मानिस वा एक युवा 44 एक बालक सत्य tweaking लागि वर्ष पुरानो महिला? तिनीहरूले कारण आफ्नो नियन्त्रण बाहिर परिस्थितिअनुसार भनेर थाह, तिनीहरूले मानिसहरूको रडार को एक धेरै बन्द छौं. त्यसैले तिनीहरू धेरै एक सानो र वा मिथ्या – बाहिर त्यहाँ अन्य अनलाइन daters दृश्यात्मक रहन. म यो सही हो भनिरहनुभएको छु. म सिर्फ यो हुन्छ कि भन्दै छु.
यो यस माध्यमलाई धेरै प्रकृति र बैठक पूर्व कम्प्यूटर त्यहि एकल मान्छे र तिनीहरूलाई को एक सभ्य प्रतिशत गरेर पूर्णतया आगामी हुनेछैन. यो अर्थमा बनाउँछ. हामी के प्रतिशत असुरक्षित छन्? हामी के प्रतिशत अरूलाई मा मापदण्ड पूरा गर्न असफल’ मानसिक जाँच सूची? हामी के प्रतिशत इमानदार भनेर थाह पर्याप्त स्मार्ट हो 63 वर्ष पुरानो अधिक वजन महिला भन्दा पुरुष जाँच सूची पूरा गर्दैन, जो त्यो पहिले छ वर्ष र तीस पाउण्ड देखि भनेर चित्र पदों किन ठीक छ?
मेरो बिन्दु हामी समूह अँगालो को कुनै प्रकारको मा फटाहा अँगालेको छ हुनुपर्छ भन्ने छैन, वा हाम्रो औंलाहरू मा हामीलाई राखन को लागि उनलाई धन्यवाद. बरु, हामी बुझ्न प्रयास र यो व्यवहार हुनेवाला र Ozzy गरेको वाला श्राप जस्तै पक्का छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, वा J.Lo गरेको वाला सम्बन्धविच्छेद मिल. क्रोधित रही केही हल र यो गर्दछ सबै तपाईं तीतो र तर्कहीन ध्वनि छ, कहीं कसैले छेकेको कहिल्यै छन् कि दुई झुकाउ.
तर हामी फटाहा रोक्न सक्दैन देखि, यहाँ तपाईं उनलाई जोगिन प्रयास लिन सक्छन् केही सतर्कताहरूबारे हो:
1) अधिक चित्रहरु को लागि सोध्नुहोस्. म नेटली Portman जस्तै हेर्नु टाउको शट हेर्न कति पटक थाहा छैन, केवल त्यो वास्तविक जीवनमा नेटली Portly भन्ने खोज गर्न, तर म मेरो पाठ सिकें. म मेरो अतिरिक्त फोटो पठाउन सक्छ भने अन्तिम वर्ष भित्र लगियो, त्यसपछि अरू कसैले पनि उनलाई छ छैन लागि कुनै बहाना छैन.
2) फोटो गुणस्तर विचार. फिल्म र लुगा दस वर्ष पहिले भन्दा फरक देखिन्छ. विभिन्न hairstyles, विभिन्न फेसन, विभिन्न रंग प्यालेट. एक तस्वीर दिनांक लग भने, व्यक्ति धेरै राम्रो कुरा लुकाइरहेको हुन सक्छ.
3) फोटो को संरचना विचार. वास्तवमा चित्र माथि बन्द र कुनै अन्य समर्थन फोटो? कसैले उनको / उनको शरीर खुसी छैन. केवल माथि छाती देखि कुनै हेर्नुहोस्? समान कुरा. सबै कालो लगाएका, साथीहरू पछि गाडे, वा एक ठूलो fern द्वारा अवरोध? त्यो व्यक्ति लुकाइरहेको छ, राम्रो कारण संग.
4) तार्किक विचार. तपाईं शारीरिक जोड गर्न चाहनुहुन्छ कहिल्यै, आफ्नो प्रोफाइल मा वा फोन मा या त, तर कुरा माथि जोड छैन भने, यो एक नोट बनाउन. आफूलाई पुकार्ने एक मान्छे 'च्यातेर’ तर पुष्ट केहि गर्दैन तपाईं सत्य बोलेका छैन. त्यो हो, जो दावा स्त्रीको संग समान 39 तर दुई grandkids छ.
म रेकर्ड मा जाने र कसैले उनको / उनको उमेर झूट बोल्न लागि व्यक्ति को प्रोफाइल मा सत्य पछि स्वीकार्छन् मात्र भने यो ठीक हो भन्न. आफैलाई मानिसहरूको मनपरी रूपमा साँघुरो खोजी देखा बनाउन झूट बोल्नु धोका गर्ने मनसाय साथ झूट कोसौं टाढा छ.
फटाहा रिसाएको रही पनि d'वर्ग छ. म तिनीहरूले अजीब को ठंड गरेकोमा बोल्यो भइरहेको मा यति क्रोधित थिए मान्छे को एक जोडी कुरा गर्नुभएको. एक उनको उमेर बन्द तीन वर्ष खौरे गर्ने स्त्रीको भन्यो. अन्य वरिपरि बदल्यो र उसलाई चित्र जीवन बिताउन नगर्ने स्त्रीको बायाँ. मलाई, यो एक सही गर्न असफल दुई खेलाएर छ. झूठा खराब, त्यो दोस्रो मिति प्राप्त छैन किनभने र तिर्न हुनेछ, तर जीवनको लागि उनको निशान कुनै कारण छ.
कुनै एक फोटो संग तपाईं धोका भने, मात्र दयालु हुनुको होइन एक वर्ग कार्य हुन, तर द्वारा आफैलाई झूट. सत्य बताएर, तपाईं कुनै संभवतः सारा अनलाइन डेटिङ दृश्य सफा गर्न सक्छन् सबै गर्यौं.
© Copyright 2017 तिथि मेरो पत्रु. संग गरे द्वारा 8celerate स्टूडियो
यो जस्तै वा छैन, हामी जीवनको जाने बाटो हाम्रो व्यक्तित्व को विभिन्न पक्ष बारे धेरै भन्छन् ....